'Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe' e-Lakereon - Eduze ne-Lutsen - I-Airbnb
'Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe' e-Lakereon - Eduze ne-Lutsen
Ukuvakasha kwakho e-Great Lakes kuqala ngokubhukha leli khaya elihle elinamakamelo okulala angu-2, ikhaya lokuqasha lamaholide elinamagumbi okugezela angu-1.5 e-Schroeder. Izivakashi zingajabulela amafidi angu-240 ogwini olugudla i-Lake Imper - ichibi elikhulu kunawo wonke laseNyakatho Melika - nokubukeka kwe-panoramic njengokungathi usemkhunjini wokuhamba ogwini olunamatshe. Chitha isikhathi futhi uphumule emphemeni ogoqwayo ngemva kwezinsuku zokwenziwayo ngasechibini phakathi nokuhlala kwakho kule Nhliziyo ethandekayo yokuphumula!
*QAPHELA: Kunezindlu ezingu-2 eziseduze eziqashisayo zeholide kule ndlu ezinamasevisi ahlanganyelwayo futhi ezinye izihambi zingase zibe khona phakathi nokuhlala kwakho. Kunamasevisi ahlanganyelwayo nezinye izivakashi*
Ikamelo Eliyinhloko: Umbhede Omkhulu | Ikamelo lokulala 2: Imibhede Emibili | Igumbi Lokuphumula: Umbhede Omkhulu Onomatilasi Wemfashini
Ugu olunamatshe olumangazayo, ukubukeka kahle kwechibi, namahlathi amade e-Timber akwamukela lapho ufika kule ndlu eyakhiwe ngamapulangwe ethi 'Inhliziyo'. Chitha isikhathi sekhwalithi ujabulela le ndawo yokubuka i-Great Lake ngokusuka emphemeni wakho ovulekile bese ugcwalisa isidlo sakusihlwa sabasebenzi (i-propane inikeziwe).
Ngaphakathi, uzothola indawo yomlilo enkulu yezinkuni (izinkuni ezinikeziwe), namafasitela abheke ichibi, kanye negumbi elihle lokokuzithokozisa kokuphumula okuhamba phambili. Phakathi nesikhathi sokuphumula, phumula kule ndawo yokuhlala esanda kulungiswa ngefenisha entsha yesikhumba futhi usakaze imibukiso noma amafilimu ku-Smart TV.
Sebenzisa ikhishi elinakho konke elinemishini yensimbi engagqwali, amatafula e-granite, nazo zonke izinto ezibalulekile zokupheka. Yabelana ngesidlo sasekuseni etafuleni lasekhishini, phuza isiphuzo sakho osithandayo etafuleni lebha, bese usetha itafula lokudlela elinwebeka libe yizivakashi ezingu-12.
Leli khaya linikeza futhi lihlanganyela amasevisi angaphandle anjenge-grill yegesi, amabhayisekili angu-4, nemidlalo yamagceke kanye nezindlu ezakhiwe ngamapulangwe ezingomakhelwane ze- 'Serenity' kanye nezindlu ezakhiwe ngamapulangwe ze- 'Tranquity'. Uma unesifiso sokuhamba neqembu elikhudlwana (kuze kufike ku-14) nokuqashisa ngamanye amayunithi, hlola ukutholakala kwezindlu Ezishintshayo # 336088 & 340811.
Uma usukulungele ukuyibiza ngobusuku, uzothola ikamelo lokulala elinombhede omkhulu onomcamelo kanye nokubukwa kwechibi ngokusebenzisa iminyango yezingilazi esilayidayo, ikamelo lokulala elinemibhede engu-2 emincane, kanye nombhede omkhulu we-memory foam egumbini lokuphumula ukuze uthole indawo yokuhlala eyengeziwe. Indlu yokugezela enobhavu inobumnandi obuphindwe kabili, i-shower, nobhavu ojulile onendawo yokubuka ichibi ukuze ube nesiqalo sokuphumula osukwini ngalunye eholidini.
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe 'inikeza indawo yokuvakashelwa engalibaleki ngasogwini oluhle nolungathintwa lwaseLake. Thatha izinyathelo ezingu-50 ukuze ufinyelele emanzini noma uhambe ukuze uhlole ukuzijabulisa kwangaphandle okuseduze, izindawo zomlando, nezinye izindawo zokuheha phakathi nokuhlala kwakho. Uzoba nokufinyelela okulula ku-Trail Hiking Trail eholela e-Oberg Mountain Scenic Overlook, kanye ne-Gitchi-Gami noma eminye imizila yamabhayisikili engapheli yosuku lokuzijabulisa noma ukuhamba ngebhayisikili entabeni.
I-Temperance River State Park ne-Tettegouche State Park kokubili izindawo ezinhle zokuqwala izintaba, ukuqwala amadwala, ukubuka izinyoni, nokutshuza eqhweni, kuyilapho i-Sugar Cove Nature Center iyikhaya lokugeleza kwe-lava eneminyaka engu-1.1 million ubudala kanye nebhishi ye-cobblestone. Ebusika, zijabulise ngokutshuza eqhweni nemizila yokushushuluza eqhweni, futhi uthole i-alpine skiing enkulu kanye nokutshuza eqhweni e-Lutsen Mountains - indawo enkulu kunazo zonke yokushushuluza eqhweni e-Midwest.
Ehlobo, abantu abadlala igalofu bangakwazi ukuhlela kahle umdlalo wabo e-Lutsen National, banikeze izifundo zemigodi engu-9 no-18, noma i-Silver Bay Golf Course. Ngemva kosuku lwakho lwegalofu, thola okokuzithokozisa okuyingqayizivele kokunambitha iwayini e-North Shore Winery entsha e-Lutsen.
Shayela enkabeni ye-Schroeder bese uhlola i-Cross River Falls kanye ne-Heritage Center ngaphambi kokujabulela ukudla okumnandi e-Schroeder Baking Company. Thatha imoto uye edolobheni lase-Tofte futhi uzijabulise ngocezu lwe-pizza e-Coho Cafe noma ukudla kwasolwandle okusha e-Bluefin Grille!